FXCC start-up နှင့်ရန်ပုံငွေဆုကြေးငွေစည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ | FXCC
ပင်မစာမျက်နှာ / FXCC start-up နှင့်ရန်ပုံငွေဆုကြေးငွေစည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
FXCC start-up နှင့်ရန်ပုံငွေဆုကြေးငွေစည်းကမ်းချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ (သက်တမ်းကုန်ဆုံး)
မြှင့်တင်ရေးကာလ: ဒီအမြှင့်တင်ရေး 30 အပေါ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရကြလိမ့်မည်th ဒီဇင်ဘာလ 2017 ၏။
အရည်အချင်းပြည့်မီ Clients တွေအနေနဲ့:
နယူးနှင့် FXCC ၏ Clients တွေအနေနဲ့ရှိရင်းစွဲ။ (သို့မဟုတ် Standard XL ကိုင်ဆောင်သူအကောင့်)
ရွေးချယ်-in ကိုမှဖော်ပြကုန်သည်ကြီးများ Hub, ဆုကြေးငွေအပိုင်းကနေတဆင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းချက်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။
clients FXCC နှင့်အတူအခြားမည်သည့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ပါဝင်ပါဘူး။
သြဇာ: ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်ပါဝင် Accounts ကိုအများဆုံးသြဇာ 1 ဖြစ်ပါသည်: 200
အရည်အချင်းပြည့်မီသောအပ်ငွေ: FXCC ကကမ်းလှမ်းငွေပေးချေ၏နည်းလမ်းများမှတဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီလိုင်းရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်သစ်ကိုရန်ပုံငွေထပ်ပြောသည်သောပိုက်ဆံစစ်ဆင်ရေး။ internal လွှဲပြောင်း, ချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိ, ငွေလက်ကျန်များနှင့်ပြန်လည်ပို့ဆုတ်ခွာကဖနျ Introducer / Affiliate / Partner ပြန်အမ်းသို့မဟုတ်ကော်မရှင်အသစ်ကရန်ပုံငွေထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ .
100% Start ကို-Up ကိုအပိုဆု: အတွက် ပဌမ အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးကာလသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီလိုင်းစဉ်အတွင်း FXCC နှင့်အတူ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအကောင့်အတွက်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီ Clients တွေအနေနဲ့ဖွငျ့ကြောင်းအရည်အချင်းပြည့် Deposit ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးအပြီးနာရီအလုပ်လုပ်နှစ်ဆယ်လေးပါး (100) အတွင်း 24% Start ကို-Up ကိုအပိုဆုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ (အနိမ့်ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအကောင့်အမျိုးအစားမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်)
50% ရန်ပုံငွေရှာခြင်းအပိုဆု: အတွက် နောက်ဆက်တွဲ / အပိုဆောင်း အဆိုပါမြှင့်တင်ရေးကာလသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီလိုင်းစဉ်အတွင်း FXCC နှင့်အတူ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအကောင့်အတွက်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီ Clients တွေအနေနဲ့ဖွငျ့ဖြစ်ကြောင်းအနည်းဆုံးငွေပမာဏ $ 100 အမေရိကန်၏အရည်အချင်းပြည့်စာရင်းနှစ်သောင်းလေးအတွင်း 50% ရန်ပုံငွေရှာခြင်းအပိုဆုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (24) ထိုသို့သောနောက်ဆက်တွဲ / အပိုဆောင်းသိုက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးအပြီးအလုပ်ချိန် ။
အဆိုပါအပိုဆုခရက်ဒစ်တစ်ဦးကုန်သွယ်အကြွေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးများအတွက်ကုန်သွယ်အကောင့်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည် 50 ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်း အဆိုပါအပိုဆု ( "အရည်အချင်းပြည့်မီကာလ") ကိုလက်ခံရရှိသည့်ရက်စွဲကတည်းက။ ဤရက်စွဲပြီးနောက်မည်သည့်ကျန်ရှိနေသေးသောအပိုဆု Credit အကောင့်ကနေဖယ်ရှားခံရကြလိမ့်မည်။
အားလုံးဆုကြေးငွေအများဆုံးငွေပမာဏ: အဆိုပါ အများဆုံး မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအထူးသဖြင့်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီလိုင်းမှ FXCC အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြု (-Up ကို Start နှင့် / သို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းအပိုဆုကြေးငွေနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်) အားလုံးဆုကြေးငွေပမာဏ $ 10,000 အမေရိကန် (သို့မဟုတ်ညီမျှ) ၏စုစုပေါင်းထက်မပိုနိုင်.
client '' တစ်ဦးက '' 1st သိုက် $ 1,000 ▶လိုင်း '' တစ်ဦးက '' Start ကို-Up ကိုအပိုဆုအဖြစ်အကြွေး $ 1,000 (ဆိုလိုသည်မှာ 100%) ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
ချိန်ခွင်လျှာ equity ခရက်ဒစ် (ရှိနိုင်အပိုဆု) Margin (Free) ကရရှိနိုင်ပါ
ထို့နောက်လိုင်း '' တစ်ဦးက '' တစ်ဦး2လုပ်nd သိုက် $ 3,000 ▶လိုင်း '' တစ်ဦးက '' ရန်ပုံငွေရှာခြင်းအပိုဆုအဖြစ်အကြွေး $ 1,500 (ဆိုလိုသည်မှာ 50%) ကိုလက်ခံရရှိဦးမည်
ဇာတ်လမ်း B ကို
client '' ခ '' 1st သိုက် $ 15,000 ▶လိုင်း '' ခ '' Start ကို-Up ကိုအပိုဆုအဖြစ်အကြွေး $ 10,000 လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ထို့နောက်လိုင်း '' ခ '' တစ်ဦး2လုပ်nd သိုက် $ 5,000 ▶လိုင်း '' ခ '' လိမ့်မည် မဟုတ် အပိုဆောင်းဆုကြေးငွေလက်ခံရရှိသည်။
မက်စ်စုစုပေါင်းအပိုဆုငွေပမာဏ $ 10,000 ထက်မပိုနိုင်
အပိုဆု, အကြွေးအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီလိုင်းရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ကဆက်ပြောသည်ခံရကြလိမ့်မည်အဆိုပါအပိုဆုသာကုန်သွယ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ် ပျောက်ဆုံးသွားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါဘဏ်စာရင်းဆုကြေးငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖွငျ့မဆိုအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအကောင့်မှထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
client '' ကို C 'မိမိအကောင့်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါကအောက်ပါချိန်ခွင်လျှာရှိပါတယ်:
client '' ကို C '' $ 2,000 ဆုတ်ခွာ▶ဆုကြေးငွေ $ 2,000 လျှော့ချပါလိမ့်မည်ရရှိထားသည့်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
client '' ကို C '' အပြည့်အဝငွေပမာဏ ($ 7,000) ဆုတ်ခွာဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပြီးဆုကြေးငွေလုံးဝဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ရရှိထားသည့်▶။
Cashback: အပိုဆုချေးငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြေချလာမည့်အပိုဒ်နှုန်းအဖြစ်မသက်ဆိုင်ပမာဏ၏တစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်ရေးပိတ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းရုပ်သိမ်းပေးရန် Balance သို့ကူးပြောင်းပါလိမ့်မည်။
1 စံတွေအများကြီးပတ်ပတ်လည်အလှည့်များ၏သေဒဏ်စီရင်ထားတဲ့ငွေပမာဏကိုလွှဲပြောင်းရကြလိမ့်မည် $1.0 အပိုဆုခရက်ဒစ်ကနေဆုတ်ခွာ Balance မှ (သို့မဟုတ်ညီမျှ) ။
client "ဃ" သည်သူ၏ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါကအောက်ပါချိန်ခွင်လျှာရှိပါတယ်:
client "ဃ" တစ်ဦး $ 1 ▶ဒီအကောင့်ကိုသမိုင်းထဲသို့အောက်ပါအပိုနှစ်ခု entries တွေကိုထည့်သွင်းတဲ့အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူ 100 စံတွေအများကြီး EURUSD (ဆိုလိုသည်မှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အမိန့်ပိတ်သိမ်း) ၏ပြီးပြည့်စုံသောငွေပေးငွေယူကုန်သွယ်:
အကြွေးထဲက - $ 1.0 (ဆိုလိုသည်မှာဆုကြေးငွေပမာဏကိုခရက်ဒစ်ကနေနုတ်ယူသည်)
အပိုဆု Deposit $ 1.0 (ဆိုလိုသည်မှာဆုကြေးငွေပမာဏကို) အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံသို့ကူးပြောင်းနှင့်အကောင့်ကိုချိန်ခွင်လျှာကိုထည့်သွင်းထားသည်။
(အရေပေါ်အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအပါအဝင်) ကိုသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီလိုင်းရဲ့အကောင့်လက်ကျန်ငွေကိုအောက်တွင်တန်းတူညီမျှတစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလျှင်အရည်အချင်းပြည့်မီကာလအတွင်း 30% (အခြားစကား: အကောင့်ရဲ့ရှယ်ယာတန်းတူဒါမှမဟုတ်ရရှိနိုင်ပါအပိုဆုအကြွေး၏ 130% အောက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိ) ကိုရရှိနိုင်ပါအပိုဆုခရက်ဒစ်၏, ထိုရရှိနိုင်ပါအပိုဆုခရက်ဒစ်ပမာဏကိုအလိုအလျှောက် (အကြွေးဝယ်ထွက်) အားဖယ်ရှားခံရကြလိမ့်မည်, သီးခြား "သိမ်းဆည်းအကောင့်" ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင့်အရည်အချင်းပြည့်မီကာလ၏အဆုံးတိုင်အောင်အအပိုဒ် 10 နှုန်းအဖြစ်အကောင့်လက်ကျန်အတူကွပ်မျက်ခံရမည်သည့်နောက်ထပ်အရောင်းအများအတွက်ဖျောပွသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီလိုင်းဆုချဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။
- ထိုမရရှိနိုင်ပါအပိုဆု (အကြွေး) ၏ 30% = $ 300
$ 1 = $ 700 - လိုင်း "ဃ" $ 1,000 တစ်ဦးကလက်ရှိစုစုပေါင်း floating ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ 700 တွေအများကြီး EURUSD တစ်ခုဖွင့်လှစ်ကုန်သွယ်မှုရှိပါတယ်ယူဆရင်, ဒီ = $ 300 ▶ Balance + Floating အမြတ်အစွန်း / အရှုံးကိုဆိုလိုသည်
$1,000 $300 $0 အဘယ်သူမျှမအခမဲ့ Margin
ရထိုက်ခွင့်ကာလအတွင်းလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အရောင်းအဘို့, လိုင်းကယျတငျအကောင့်မှနုတ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေအများကြီးနှုန်း $ 1.0 တစ်သိုက်ခံရလိမ့်မည်။
- မှုဆက်လက်ရှိစေခြင်းငှါမတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်အခြေအနေများကြောင့်အမြဲအတိအကျ 30% မှာအပိုဆု (အကြွေး) ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
FXCC Stop-ထွက်မှအဆင့်, အအပိုဆုဤနေရာတွင်ထွက်သတ်မှတ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဆုတ်ခွာလျှင်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်ပေမယ်ဘဲ, အလိုင်းယင့်ခံရစေခြင်းငှါမဆိုအနားသတ်ခေါ်ဆိုခသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်မဖြစ်ရကြမည်။
ဒါဟာသူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိရှိကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းထရေးဒင်းစနစ်ကနေတဆင့်ပြည်တွင်းမေးလ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသတိထားမိပေးခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်အဆိုပါကမ်းလှမ်းချက်ဒါမှမဟုတ်ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုခုကိုရှုထောင့်, ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန်, ရပ်ဆိုင်းရန်, cancel သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းရန်, မထိုက်မတန်ယူဆအဖြစ် FXCC, ပိုင်ခွင့်ရှိသည် သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအသိပေးစာအားမရဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုအအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ထိုသို့မဟုတ်ရင်လက်တွေ့မဟုတ်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောပြင်ဆင်ချက်အနည်းဆုံးသုံး (3) စီးပွားရေးနေ့ရက်များအသိပေးစာအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးရနျကွိုးစားပါလိမ့်မယ်။
(ဗားရှင်း 2.00 - 03 / 08 / 2017)